कोरोना महामारी चपेटामा व्यूटिपार्लर व्यवसायी
जेठ २८, २०७८ निलम पंत
कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकारले बाध्यकारी अवस्थामा गरेको निशेधाज्ञाको कारण अत्यावशयक व्यवसाय अन्तर्गत नपरेको पार्लर व्यवसाय पनि धरापमा पर्न लागेको छ । निशेधाज्ञामा आम मानिसहरु घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले अध्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवसायमा नपरेको पार्लर व्यवसाय धरापमा परेको हो ।
वीरगंजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने माईस्थान वरिपरिका खाद्यान्न पसलहरु बिहान बेलुका खुलेका हुन्छन् । तर छेवैमा रहेका व्यूटिपार्लरका व्यापारिक फर्महरु निशेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै बन्द छन् माईस्थानमा रहेको करिश्मा व्यूटिपार्लरकी संचालिका राधा हमालले भनिन् । उनले संचालन गरेको माईस्थानको करिश्मा व्यूटिपार्लर पनि त्यसैको उदाहरण हो । तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न पसलहरुमा भीड लाग्दासँगैको पसलमा एक दुई जनामात्र ग्राहक राखेर चलाउने व्यवसाय ठप्प छ । कारण अत्यावश्यकीय सेवा प्रभाव गर्ने व्यापारिक फर्म नभएको बताइन्छ । त्यसैले उनको व्यूटिपार्लरमा निशेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै ताला झुण्डिएको हो ।
अब त व्यवसाय गरेर चल्ल सकिन्छ भन्ने आस मर्न थालेको भन्दै राधा हमालले निरासा व्यक्त गरिन् । “अघिल्लो पटक ७ महिना घरमा बसियो । अघिल्लो पटकको लकडाउनको सटरभाडा तिरिसकेको छैन । लकडाउनपछि पार्लर संचालन गर्न ऋण लिएको पैसा र सटरभाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको उनले तर्क गरिन् । बिस्तारै पुरानो लयमा फर्कन थालेको समयमा पुनः अर्को बन्दाबन्दीले घरमा नै थुनिएको उनको तर्क छ । घर साहुलाई भाडा छुट गराइदिनुस् न भन्दा बैंकले ब्याज छुट दियो भने छुट गरौंला भन्छन्” हामी जस्ता व्यवसायीको विचल्ली हुने भयो समग्र व्यूटिसियनहरुको समेत सन्दर्भ जोड्दै उनले बताइन् ।
माईस्थानका अधिकांश किराना पसल, कपडापसल, मोवाइल पसल भित्र भित्रै खुला छन् । तर बिडम्बना त्यही पसलका छेउमा रहेको अर्को सभ्यता व्यूटिपार्लरको हाल पनि उस्तै छ । बन्दले निकै सताएको सभ्यता व्यूटिपार्लरकी उर्मीला थापाको पनि पार्लर बन्द छ । पहिलाकोभन्दा अहिलेको कोरोनादेखि सबै डराएको अवस्था पनि छ उनले तर्क गरिन् । “पोहोर ७ महिनासम्म बन्द गरियो । तर पहिलो लकडाउनमा त कन्ट्याक बेसमै भए पनि ग्राहक आएका थिए । तर यसपटक त बन्दी खुलेपछि पनि ग्राहक आउने हो की हैन भन्ने चिन्ता छ” नेपाल व्यूटिसियन यूनियन संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी थापाले थापाले भनिन् ।
उर्मिला र राधाले चलाएका व्यूटिपार्लर त केवल नमूना मात्र हुन् । उनीहरु जस्ता धेरै पार्लरकर्मी समस्यामा परेको तर्क गर्छन् । अरु पसलमा आउँदा जोखिम नहुने र पार्लरमा आउँदा जोखिम हुने यस्तो पनि हुन्छ ? अर्की पार्लर व्यवसायी तथा राष्ट्रिय सौन्र्दयकर्मी यूनियन वीरगंज नगर कमिटी अध्यक्ष ओमकुमारी शर्माले प्रश्न गरिन् । उनी एकल महिला पनि हुन् । दुई बालबालिका र आफू सहित तीन ज्यानको खाद्यान्न खर्चदेखि अन्य शिक्षादिक्षा लगायतका सबै खर्च उनकै जिम्मेवारीमा छ ।
पहिलो लकडाउनबाट तंग्रिदै गरेको व्यवसायलाई पुनः थला परेको उनले बताइन् । बन्दपूर्व केही बचत गरेको पैसाले घर खर्च चलाए पनि अब धान्न नसकिने उनको भनाइ छ । अहिले पसलमा भएको सामान बिक्री गर्दै घर खर्च चलाइरहेकी छु । राम्रो घरवाला परेकोले मेरो वास्तविक समस्या देखेर केही महिनाको घरभाडा र पार्लरभाडा मिनाह गरिदिए । तर सधैं मिनाहा गर्न आफूले पनि भन्न मिल्दैन । उहाँहरुलाई पनि बाध्यता छ नि उनले तर्क गरिन् ।
पार्लर व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने पार्लर व्यवसायीहरुको माग छ । विगत १० वर्षदेखि यसै पेशामा आबद्ध सरक्षा व्यूटिपार्लरकी सुमित्रा सापकोटाको आय स्रोत पनि पार्लर व्यवसाय नै हो । लकडाउनले व्यवसाय बन्द हुँदा दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुने उनले पनि तर्क गरिन् । राष्ट्रिय सौन्र्दयकर्मी युनियन प्रदेश नं. २ को अध्यक्ष समेत रहेकी सापकोटाले खास सिजनको बेला नै यहि थियो । बन्द नभएको भए यही वेलामा कमाएर हामीले अफ सिजनको जोहो गर्नु पथ्र्यो ।
अहिले त दैनिकि गुजारा गर्न नै समस्या हुने भयो उनले भनिन् । अब त साझ बिहानको छाक टार्नै सोच्नु पर्ने अवस्था आउन लाग्यो । ऋण काढेर कति दैनिकी चलाइरहने ? उनले पनि प्रश्न गरिन् । वीरगंजमा करिब ३ सय ५० जनाभन्दा बढीको यो पेशा बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएको उनको भनाइ छ । अब त कसरी संचालन गर्ने भन्ने ? केही सोच्नै नसकिने भयो । विगत १६ वर्षदेखि यही व्यवसायलाई निरन्तरता दिदै आएकी आकर्षण व्यूटिपार्लरकी संचालिका राधिका केसीले पनि भनिन् । दैनिक २ हजारदेखि ४ हजारसम्म आम्दानी गर्ने पार्लर व्यवसायीहरुको आम्दानीको स्रोत नै पार्लर व्यवसायबाट नै हो । वीरगंजमा हाल ३ सयभन्दा बढी पार्लरहरु रहेको उनले बताइन् ।
कति एकल महिला दिदीबहिनीहरुले पार्लर संचालन गर्दै आइरहनु भएको थियो । हामीलाईभन्दा अझ उहाँहरुलाई कति गाह्रो होला ? त्यहीबाट घर परिवार चलाउने अवस्था छ । व्यूटिशियनहरुलाई नगरपालिकाबाट कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था पनि छैन । अब लकडाउन खुले पनि हामीले पार्लर खोलेर मात्र भएन कस्टमर पनि आइदिनु प¥यो । त्यहाँ पनि गाह्रो छ । खर्च बढिरहेको छ आम्दानी भने शून्य छ । अहिले हाम्रो सिजन भनेको बैशाख जेठ हो । राम्रो आम्दानी यही बेला हो । कोरोनाले सब सिजन खायो । अब १/२ वर्ष यस्तै रह्यो भने पार्लरहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ परी व्यटिपार्लरकी संचालिका तथा राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी प्रदेश नम्बर २ की क।ेषाध्यक्ष सुनिता मान्नधरले भनिन् ।
विगत ९ वर्षदेखि यो पेशामा आबद्ध उनले पनि सटरभाडा दस हजार तिर्नुपर्छ । पार्लरमा राम्रो आम्दानी थियो । कर्मचारीको तलब पाँच हजार छ । पार्लरकै आम्दानीबाट घरखर्च, सटरभाडा स्टाफ तलब व्यवस्थापन गर्दै आए पनि अब भने सोच्न पर्ने अवस्था आउन थालेको तर्क गरिन् । परिवारको सदस्य पनि सक्रंमित भएको अनुभव सम्हालेकी मानन्धरले यो गाह्रो स्थितिबाट केही सहज हुन लागेको समयमा यो बर्षको सिजन नै सकिएको बताइन् ।
#मार्कामा सौन्दैर्य व्यवसाय #व्युटि पार्लर व्यवसाय #कोरोना विशेष खबर #कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरण #कोरोना कहर #कोरोनामा अर्थतन्त्र
शुक्रवार, जेठ २८, २०७८, ०४:०६:००